Nsonaazụ Ule-Udo na Hubspot | Martech Zone
Ọ bụ ihe ịtụnanya mgbe niile ịhụ etu esemokwu dị iche na ọkpụkpọ oku ga-esi nwee nnukwu mmetụta na ịpị ọnụ ọgụgụ na ntụgharị. Otu n'ime ebe Hubspot na m echeghị na ọtụtụ ndị mmadụ n'ụzọ zuru ezu leverage bụ ha Call-To-Action ngalaba.
You'll ga-ahụ otu oku iji mee ihe na Martech ala na n'okpuru aka ekpe. Anyị nwalere ụdị atọ nke otu ọkpụkpọ oku na-eme. Izi ozi dị nnọọ otu, mana anyị dịgasị iche na agba. Otu bụ ihe ndabere dị oji nke jikọtara peeji ahụ na nke ọzọ dị ka okike - na-agbanwe ụcha bọtịnụ.
Nsonaazụ ndị ahụ na-atọ ụtọ - CTA na bọtịnụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ karịa ndị ọzọ CTA site na ọ fọrọ nke nta ka okpukpu abụọ! Buttondị bọtịnụ na-acha akwụkwọ ndụ rụpụtara obere clicks, mana ọnụọgụ ntụgharị dị elu nke ukwuu.
Nke a bụ obere ule ebe naanị anyị dịgasị iche na agba… anyị ga-aga n'ihu ebuli CTA na nsụgharị dị iche iche na agba ndị ọzọ na mgbanwe ule iji bulite nsonaazụ ahụ n'ezie. Anyị makwaara eziokwu ahụ na mkpokọta pịa ọnụego dị oke ala, kwa… anyị nwere ọrụ anyị ga-arụ na whee anyị na-eweta CTA a. Ọ dị n’ebe siri ike ma ọ baghị uru na ọdịnaya gbara ya gburugburu.
Hubspot na-eme ka ọ dị mfe iji nwalee. Nwere ike ịgbakwunye dị ka ọtụtụ nsụgharị nke oku gị na-eme ka ha interface na mgbe ahụ dị embed edemede ha na-enye na saịtị gị. Hubspot enyekwara ụzọ kwụsị kpọmkwem ọbịa na oku na-eme… ma nke ahụ bụ ihe ọzọ post!
Cheta na: DK New Media bụ ihe asambodo Hubspot Agencylọ ọrụ.
Tags: ule ulekpọọ ka emekpọọ ime uleokpokorotesting
Amaghị m na ị bụ Hubspot Agency Doug! Anyị na-eji Hubspot ugbu a maka http://www.tynerpondfarm.com ma na-eche echiche ịgbanwe. Anyị enwere ike ikwu maka ya n'oge na-adịghị anya? Anyị anaghị enweta nsonaazụ anyị chọrọ mana nke ahụ nwere ike ịbụ nsogbu anyị….
Jenụwarị 15, 2013 na 6:54 PM
Ee, o doro anya. Anyị mejuputara Hubspot, Pardot, ActOn, Marketo na Eloqua na ndị ahịa anyị @chrisbaggott: disqus :). N'ezie, ụlọ ọrụ ndị Indiana amaghị nke ahụ n'ihi na ha na-ewe ndị ọrụ ụlọ ọrụ na steeti ndị ọzọ ụgwọ, lol.